Gudoomiye saleebaan,Qodabkan inaga daaya waxa ogol macalimiinta iyo waalidka Ardeyda | Biyoguurenews.com
Home Wararka Gudoomiye saleebaan,Qodabkan inaga daaya waxa ogol macalimiinta iyo waalidka Ardeyda
Guddoomiyaha golaha guurtida Somaliland, mudane Saleebaan Maxamuud Aadan, ayaa soo jeediyay in ajandaha dooda kalfadhiga 76-aad, fadhiga sagaalad laga saaro qodobkiisa waxbarashada ku jira xarafka “Xal u helida korodhka lacagta laga qaado ardayda dugsiyada gaarka ah.”, taas oo uu sheegay in ay waalidiinta iyo ardayduba lacagta qaaliga ah raalinka yihiin.
Guddoomiye Saleeban cod ayuu galiyay in laga saaro qodobka waxbarashada xarafkiisa ku qotima ‘Xal u helida korodhka lacagta laga qaado ardayda dugsiyada gaarka loo leeyahay,’ sidaasi ayaa loogu coddeeyay lagagana saaray.
Sidaasi ayaa ay mudanayaashu ku gudo galeen dooda ajandaha kal-fadhiga 76aad qodobkiisa waxbarashada.
Guddoomiye Saleebaan isaga oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa uu yidhi. “Waxa aynu maanta galayna qodobkii waxbarashada doodiisi, intaan la is qorin hal soo jeedina.
Waxaan soo jeedinayaa Qodob halkan ah oo dayib inala bartay, lacagta bisha ee dugsiyada gaarka loo leeyahay ay ardayda ka qaadayaan ee la leeyahay hala dhimo, waar Dayibow yaa ina dhageysanaya, adigase yaa ku dhageysaya.
Dadku sidaasi ayay ku rabbaan, macalimiintiiba rabbta, oo waalidiintii carruurta dhashay ayaa rabba, oo carruurtiiba rabta, ma in lagu karaahiyaysto uunbaad rabta, anaga nalala kaa karaahiyaysan maaye, qodobkaasi inta ogoli gacanta ha taagto, dejiya sidaasi ayaanaynu kaga saarnay”
Previous articleBukhari oo hortegay barlamanka Aqbalayna go,ankii maxkamadu ku laashey warqadiisii
Next article5 Berbera, Hadanu nahaey Mujahidiintii Laga Dumiyay guriga sooyal dahabshiil waanu heshiinay